Sehatra 10 hianarana fandaharana | Avy amin'ny Linux
Sehatra 10 hianarana programa
Fijerena hitako ireo rohy ireo, momba ny fandaharana izy ireo, eo am-pamakiana, dia tonga tany amin'ny toerana sasany izay nitanisany ilay fianarana tsy hita maso, izay hitako fa tena nahaliana.
1 2. Andramo i Ruby
2 3. Skillshare
3 4. Fandaharana
4 5. Team Tree House
5 6. Sekoly fehezan-dalàna
6 7. Khan Academy
7 8. Hackasaurus
8 9. Stanford University
9 10. Oniversite P2P
2. Andramo i Ruby
Heveriko fa marina ny filazako fa ny vondrom-piarahamonina Ruby dia manana fampianarana lesona faran'izay tsara sy mahafinaritra indrindra amin'ny rehetra. Ohatra ny malaza Hackety Hack ary ireo ara-panahy Ruby koans. Amin'ny lafiny iray, i Try Ruby dia lesona mifanakalo hevitra, mitovy amin'ny tantara azo soratana, izay manasa anao hahita ity fiteny mahafinaritra ity. Tsy hieritreritra an'izany aho ary hanome ahy fotoana hianarako an'i Ruby faran'izay haingana.
"Ianaro izay avy amin'ny olona, ​​na aiza na aiza." Izany no fampanantenan'ny sehatra iray izay mampifandray tambajotran'ireo mpampianatra / mpianatra node, olona izay mianatra ary mampianatra fandaharana amin'ny alàlan'ny fampianarana izay itarihan'ny fiarahamonina iray ny fianarana.
Fandaharana amin'izao fotoana izao, Java, PHP, C ++, Python ary fiteny fandefasana fandaharana maro ao amin'ny tranonkalanao, eo ambanin'ny fotokevitra telo lehibe: mianatra, kaody ary mizara. Ny interface dia tsy ny tsara tarehy indrindra, na izany aza dia mandeha tsara izy io. Ny fanamby ataonao amin'ny programa dia hevitra tsara indrindra.
Eo ambanin'ny teny filamatra hoe "Inona no tianao hianarana anio?", Team Tree House dia manolotra fampianarana an-tserasera, miorina amin'ny horonan-tsary fohy, nohazavaina tsara sy nalahatra, tamin'ny fandaharana amin'ny Internet sy ny fandaharana finday miaraka amin'ny iOS. Mila mandoa fisoratana anarana ianao hahazoana ny fitaovana rehetra, izay manavao ny fomba sy mihalehibe matetika. Tiako izy ireo manao haingon-trano ary manondro fanabeazana mihoatra ny diplaoman'ireo oniversite izy ireo.
6. Sekoly kaody
"Mianara amin'ny fanaovana" amin'ny sehatra tohanan'ny IBM, Github, AT&T, feno fampianarana an-tserasera, mifantoka amin'ny gamification ny Fanabeazana. Famoronana tranokala mahafinaritra. Mendrika lahatsoratra iray hafa hiresahana ny ho avin'ny fandaharam-pampianarana.
Ity sehatra ity dia ny YouTube an'ny fanabeazana an-tserasera, feno rakitsary misy kilasy fandaharana feno ary lohahevitra maro hafa. Na dia ampitahaina amin'ireo sehatra hafa aza ny Khan Academy dia toa nentim-paharazana, ny marina dia miasa (na amin'ny finday aza).
Mozilla dia miahiahy hatrany amin'ny fanabeazana manodidina ny tranonkala misokatra, mifototra amin'ny fenitra, miaraka amin'ny browser ho laboratoara ho an'ny hevitra masaka miaraka amin'ny HTML5. Hackasaurus dia fiezahana manintona hitondra an'ity fianarana ity amin'ny ambaratonga hafa, saika ny an'ny Lego blocks, izay misy ny programa, mifangaro, manandrana: hetsika mamorona tanteraka.
9. University of Stanford
Amin'ny endrika eto dia tsy misy afa-tsy ny horonan-tsary sy fampisehoana nentim-paharazana. Saingy lalina dia lalina, manana ezaka ara-pianarana lehibe avy amin'ny mpampianatra ao amin'ny Oniversiten'i Stanford izahay hanaterana hatrany izay hitan'ny sasany ho fandaharam-pianarana fandaharana finday iOS tsara indrindra amin'ny tranonkala. Fampivoarana goavambe toa ny Mazava ho azy fa ny faharanitan-tsaina artifisialy nomen'i Norvig sy Thrun tamin'ny faran'ny taona lasa.
10. Oniversite P2P
Mpampianatra rehetra, mpianatra rehetra: fanabeazana P2P, misy mitovy aminy. Fanabeazana iaraha-miasa, namboarin'ireo vondrom-piarahamonina mpankafy, miaraka amin'ny fanahin'ny loharano malalaka sy ny kolontsaina malalaka. Amin'ny maha-foto-kevitra azy dia mahafinaritra izany; amin'ny maha fampiharana azy dia mivoatra hatrany, tena organika. Eto ianao dia hahita fandaharam-pampianarana tena tsara, ny sasany amin'ny lohahevitra hafahafa, fa mahaliana daholo.
Mahafantatra sehatra hafa mitovy amin'izany ve ianao? Amin'ny Espaniola? (Tsy miditra amiko akory ny anglisy)
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Tutorials / Manuals / Tips » Sehatra 10 hianarana programa
iray hafa dia hoy izy:
Tsara ity lisitra ity, tsy nahalala ny maro an'isa…. na eo aza ny lesoka, ny làlana manandrana ruby ​​dia iray amin'ireo atolotra ao amin'ny codechool, raha ny marina ny voalohany:
Mamaly iray hafa
Codeacademy ihany no fantatro. Misaotra nanoratra an'i Alf.
Salama, fantatro fa tsy ity no lahatsoratra mety fa te-hanontany ny hevitrareo momba ny CrunchBang aho
tammuz, ao amin'ny forum http://foro.desdelinux.net/ Misy ny hevitra momba an'io, satria tsy ampiasaiko dia tsy afaka milaza aminao aho.
Iray ihany, misaotra ny fanehoan-kevitra, satria tsy fantatro ny momba an'io lohahevitra io ary te hianatra ho ahy aho misy zavatra 2 samihafa.
Misaotra betsaka Alf, ity famintinana ny sehatra ity dia tsara ho ahy satria tiako hampiasa ny fotoanako malalaka amin'ny fahavaratra mba handrindrana zavatra kely noeritreretiko!
Misy ihany koa ireo olona avy amin'ny w3schools ho an'ny Internet.
http://www.programr.com/ mahafinaritra izany!!
Fandraisana anjara tsara Alf !!
Versionitis mahery dia hoy izy:
Rehefa efa nalaim-panahy aho hanandrana Ruby amin'ny lalamby !!
Mamaly ny Versionitis mahery
Ridal dia hoy izy:
Tiako ireo lahatsoratra momba ny fandaharana ireo.
Mamaly an'i Ridal
Tsara tokoa, avy eto dia Codecademy ihany no fantatro, fandraisana anjara tena tsara !!
Ny zavatra mety hitranga amiko dia ny lisitry ny IDE, indrindra ny Python, marina? Haha
Hijery raha manompo anao izy ireo http://python.org.ar/pyar/IDEs
Sa ity http://www.google.com.mx/#hl=es-419&sclient=psy-ab&q=entorno+de+programacion+integrado+para+python&oq=entorno+de+programacion+integrado+para+python&gs_l=hp.3…1609.12522.0.12812.45.26.0.19.19.0.236.3374.4j21j1.26.0…0.0…1c.pnTYs1oUJpQ&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.,cf.osb&fp=6ec16ffdd78162f&biw=1169&bih=660
Raha ny marina, amin'ny sinaptika dia nanoratra python aho, ary nanome ahy ny safidy rehetra, "IDE python" amin'ny kinova 2.
woow this good!
Te hanampy an'i Velneo aho (http://velneo.es) dia mora nefa mahery.
100% amin'ny Espaniôla izy io, maro karazana, miasa ho an'ny rahona na eo an-toerana izy io, manana modely fampiharana loharano misokatra izay azonao ampiasaina malalaka….
Fanamarihana: Natao manokana hamoronana sy hampandehanana ny rindranasa fandraharahana
Valiny tamin'i Nico
OpenSUSE 12.2 RC misy
Kanto vaovao nofidina ho an'i Debian Wheezy